Zuckerberg isebenza on drones WiFi for ezindaweni ezikude - Izindaba Rule
Zuckerberg isebenza on drones WiFi for ezindaweni ezikude
CEO FACEBOOK Mark Zuckerberg yenze izinhlelo ukuletha internet emiphakathini eqhelile usebenzisa drones.
Ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi-non-nzuzo internet.org inhlangano yakhe, Zuckerberg wembula ukuthi ihlangene ne NASA Ames Research Centre kanye nenkampani UK Drone Ascenta sekuphindze sibe ngemahlahlandlela letinye solar sikagesi izindiza unmanned ukuze uvumelanise WiFi kuvela esibhakabhakeni.
Umqondo ifana ne izinhlelo inthanethi giant Google yokukhulula ukufinyelela internet nge Balloons ngaphansi kwesihloko ezingabazisayo “Project Loon”.
It kakade bekulokhu ngesonto esimatasa kakhulu Facebook tycoon emva kokuhlukana $ 2bn for virtual inkampani engokoqobo-earphone we-Oculus VR. Ukuthutha lithole nezinye izinkinga kubantu izisusa zakhe futhi kubonakala sengathi yena uye wakhetha ukuqeda isonto kusale ukunambitheka omuhle emilonyeni zabantu.
Omunye icabangele noma ukukhishwa kohlelo Drone WiFi uzobe kubiza, futhi University of Sheffield onjiniyela kungase baye bathola impendulo izindiza 3D ezinyathelisiwe.
Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) at the University of Sheffield uye wakha sibonelo 1.5m ububanzi of an unmanned imoto zasemoyeni (UAV), enesisindo ngaphansi 2kg futhi zakhiwa thermoplastics.
Okwamanje Drone iye kuphela esetshenziswa njengendlela glider, Nokho inhlanganisela ezengeziwe 3D ephrintiwe izingxenye kanye izingxenye ezishibhile electronic, the UAV kungaba ezishibhile, ifomu disposible kwezithuthi ekahle bephonsa yaba izingxenye empini, hotzones enuzi kanye nezinye izindawo okunzima ukufika kuzo noma esinenzondo.
Kungenjalo singaba indlela ekahle sikhipha izifiso internet.org eziphakeme inethiwekhi yayo Drone WiFi.
Lesi sihloko, Zuckerberg isebenza on drones WiFi for ezindaweni ezikude, is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge imvume.
20616	1 Facebook, Google, Mark Zuckerberg, Wi-Fi
← Mavericks OS egijima ku kakade 40 abangamaphesenti angu-Apple Macs North Korea uyafunga hhayi siqambe isivivinyo entsha yenuzi →